Operation Vula - INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUTHUTHUKISWA KOMNOTHO, EZOKUVAKASHA NOKONGIWA KWEMVELO KWAZULU-NATAL UNKK NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKUBUNGAZA ABESIFAZANE KWIMIFELANDAWONYE, WARD 3 ETHEKWINI, 06 AUGUST 2019
INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUTHUTHUKISWA KOMNOTHO, EZOKUVAKASHA NOKONGIWA KWEMVELO KWAZULU-NATAL UNKK NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKUBUNGAZA ABESIFAZANE KWIMIFELANDAWONYE, WARD 3 ETHEKWINI, 06 AUGUST 2019.
Kuyintokozo enkulu ukuthi sibe nani osukwini lwanamuhla lapho sigubha khona inyanga yabesifazane.
Sihlangana nje kusele izinsuku ezintathu ngaphambi kokuthi sigubhe usuku lwabesifazane ngomhlaka 9 August. Lubalulekile-ke lolusuku muziwakwethu ngoba kulapho abesifazane bazibonakalisa khona ubuqhawe, ukuzinikela, nothando abanalo ngalelizwe.
Kungalolusuku lapho bahlela khona ukhukhulelangoqo weMashi ebheke komkhulu eUnion Buildings ePitoli ngo 1956 bengawaphethe amapasi ababekhala ngokuthi angaphathwa abesifazane njengoba kwakunjalo phansi koMthetho waPasi kahulumeni wobandlululo.
Kulemashi eyayiholwa izingqalabutho zomama sibala uAlbertina Sisulu, uLilian Ngoyi, Bertha Gxowa, Rahima Moosa, Florence Mkhize, Ruth Mompati, Sophia Williams-De Bruyn, Helen Joseph nabanye besifazane abangu20 000 bezinhlanga ezahlukene kwacaca ukuthi iqhaza labesifazane lingakanani emphakathi.
Lokhu kwawathusa kakhulu amaBhunu ngoba uma ukhumbula kahle kwakunomthetho ongakuvumeli ukuhlangana ngamaqoqo shiya-ke izinkulungwane ezingaka.
Laba besifazane esengibabalile bashintsha okuningi ngalelizwe esilibona namuhla. Ubuchule nobunzulu bokuhlela lemashi osukwini lwangoLwesine lapho wonke umuntu osebenza ezindlini wayenikwa ikhefu kwaba yinto enobuchule obukhulu. Ngiyathemba nalowo owanguNdunankulu uJ.G. Strydom wakubona lokhu.
Umzabalazo waqhubeka-ke lapho abesifazane base bephambili kakhulu kumzabalazo. Uzokhumbula nokuthi uLilian Ngoyi ungowokuqala wesifazane ukuba yilungu lesigungu esiphezulu kuKhongolose (NEC).
Muzi wakwethu bengithi angidlule nje kulendawana ukunazisa ukuthi noma ngabe ikuphi ukuzabalaza enikukona nime emahlombe amaqhawe akithi esifazane.
Kulesikhathi sanamuhla abesifazane babheke nomkhulu futhi nabo umzabalazo wokubhekelela amakhaya, ukondla imindeni, ukufundisa izingane nokuningi. Engikubalula kakhulu nje ukuthi ngisho ukuthi bathwele abesifazane kakhulu empilweni yabo.
Silapha-ke namuhla ukuzobungaza iqhaza elibanjwa izinkampani zomama ekuthuthikisweni komnotho wezwe lethu. Siyazi ziningi izinkampani zabomama ezenza imisebenzi emikhulu ebabazekayo kodwa ezinye zazo zigcina ngokufadalala ngenxa yokungalutholi uxhaso.
Ngizimisele njengoNgqongqoshe omusha walomnyango ukwenza ukuthi imifelandawonye ithole uxhaso olufanelekile kwizikhungo zikaHulumeni ezibolekisa ngemali neziphinde zikhiphe izibonelelo zoxhasomali.
Ngeledlule ngithule isabelomali salomnyango. Phakathi kokunye ngikhulume kakhulu ngokuxhaswa kwabantu bakithi. Ngikhuluma nje sizokwethula isikhwama seOperation Vula maduze nje esinenani okwamanje elikuR105 million. Engifuna ukukubona kakhulukazi izinkampani zabesifazane, imifelandawonye kanjalo nabantu abasha ikakhulu besifazane kuyibona abahlomulayo kulesikhwama.
Lesikhwama sizosiza abaningi. Siyazi emalokishini nasezindaweni zasemakhaya baningi abantu abazisebenzayo. Abantu bakithi bayashisela, bakhanda izimoto baphinde bafuye izinkukhu. Bakwenza nje lokhu abanandawo yokusebenzela banethwa zimvula, abanayo imishini yokuqukula izingini noma amakani kapende wokufutha imoto, izinkukhu zabo azikhanyiselwa ebusuku ukuthi zidle njalo nje zinonophale.
Lesibonelelo sizosiza kakhulu kukho konke lokhu uma nje efaka isicela sisicubungule bayobe sebewele ngelibanzi.
Enkulumeni yami ngesonto eledlule ngikhulumile futhi kakhulu ngoRaset. Lolu uhlelo loguquko olunqala kwezolimo oluhlose ukuvula amathuba ekukhiqizweni kokudla kusukela esivunweni sezolimo sabalimi ababencishwe amathuba ithuba kuye emabhizinisini enza imikhiqizo yezolimo. IBakerz Creation enye yalezinkampani ngoba isebenzisa umkhiqizo yezolimo.
Okunye okuhlonzwe uRaset ukudala umgudu wezokuhweba kwezolimo ukugwema izithiyo ezikhona ezivalela ngaphandle labalimu. Lokhu sikwenzile bheka nje sesinikele ngamaloli ayisithupha aneziqandisi, kanjalo namathathu ane-mesh wire, amaveni ayisithupha adonsa inkonyane, izindawo zokugcina umkhiqizo wezolimo.
Sithi-ke singuHulumeni imakethe sinayo njengoba sinezikole eziyizinkulungwane, izibhedlela nemitholampilo kanjalo namajele lapho abanyu bakithi bezokwazi khona ukuyisa imikhiqizo yabo. Sizovula amathuba anjalo ukuze uma utshala noma ubhaka izinkwa uwubone lomsebenzi wakho lapho uphelela khona futhi ukwazi ukuhlomula.
Kanti futhi siphinde sibe nenye yezinkampani ebizwa ngeKZN Growth Fund enika osozimboni bakithi isibonelelo uma bevula noma benobunikazi bezinkampani ezinkulu ezikhiqizayo.
Akekho esifuna asale ngaphandle. Ngiyazo besivamile ukukhuluma kanjena kusazoba wukhetho lukaZwelonke kepha manje lokhu esakuthembisa siyakwenza kwakukungekhona nje ukuthenga amehlo abantu bakithi. Siyaqhuba siya phambili futhi akekho esifuna asalele ngemuva njengoba sibuyisela umnotho kubantu.
Abesifazane abakumifelandawo badlala indima enkulu emnothweni wezwe. Ngithi angikuveze nje ukuthi ucwaningo luthi emhlabeni wonke jikelele ngeke kube nentuthuko kwezomnotho osomabhinisi abancane bengekho ikakhulukazi imifelandawonye. Yibo izinjini zomnotho.
Lokhu kuyaziwa futhi yingakho lwanqunywa kwabekwa ngokusemthethweni iNhlangano yeZizwe eminyakeni engu 25 edlule usuku lwemifelandawonye. Lwaqala ukugujwa lolusuku eminyakeni engu 96 eyadlula. Kulonyaka isiqubulo sethu sonke sishaya emhlolweni sithi “Co-ops 4 Decent Work” okusho ukuthi impela siyabhukula ukuthi imifelandawo isebenze ngokuphakela imisebenzi iqashe abantu ngemisebenzi futhi ebonakalayo. Lokhu kwenziwe nangokuhlonipha amalungelo abantu.
Ndabezitha Nkosi yamaQadi,
Ngiyazi noMapholoba unodedangendlale wendawo lapha. Siyadinga ukuthi kuvuleleke izindawo lapho abesifazane nentsha bezokwazi khona ukuvula izindawo zokusebenza nokusebenzela.
Ngikhuluma nje siphezu komshikashika wemashi ehlukile kakhulu njengoba sibheke kwezobuchwepheshe obunzulu besimanje; phecelezi iFourth Industrial Revolution. Ngiyazi lapha kugcwele nabantu abasha okumanje nje ngikhuluma baphethe omakhalekhukhwini okuthiwa ama”SMART PHONES”. Asingagcini nje ngokudlala uWathaphu noFacebook noma siziphophothele uInstagram ngalamafoni ethu. Kepha ake sibheke, njengoba nje kuthiwa Smart Phone impela ihlakaniphe iqedile leyofoni kodwa yini ongayenza ngayo?
Ifoni iphethe okuningi esingadala ngakho amathubaemisebenzi, singenza ama App noma sisebenzise amaApps akhona ukushintsha izimpilo zethu.
Ngeviki nje eliphelile kuphume izibalo ezingezinhle ezithi izinga lokungaqashwa lenyuke lafika kumaphesenti angu 29. Ziyethusa lezibalo kanti futhi ziyakhombisa ukuthi itshe limi ngothi njengoba sekudiliza ngisho amabhange manje. Lokhu kwenziwa ukuthi imisebenzi ebiyenziwa ngabantu emabhange manje isiyenziwa imishini namaKhompiyutha.
Lokhu kuseyisiqalo nje, luyeza luyanyelela njengoba imisebenzi eminingi isizokwenziwa amarobhoti azishaya sabantu. Konke lokhu kusishiya nombuzo wokuthi simi kuphi njengabantu. Yini okumele siyenze ukuze singaphinde phela sisalele emuva nakulesikhathi sobuchwepheshe.
Amakhulu eminyaka sivalelwe ngaphandle thina singama-Afrika ezintweni zokuthuthukisa uluntu Kodwa manje sithi ngeke futhi siphinde sisalele emuva. Siyangena nathi emnothweni wezobuchwepheshe besimanje obunzulu.
Kungakho Mapholoba, Nkosi yamaQadi sithi kumele sakhe lokhu okuthiwa amaIndustrial Parks nakuzo izindawo zamakhosi akithi. Silethe omahlamba nendlwana lapho abantu abasha nabantu bakithi nabantu besifazane bezosebenzela khona. Bazodayisa idata, balungise amafoni benze okuningi kobuchwepheshe ukuze singene shi kulomkhakha. Lokhu ngizokumela nginguNgqongqoshe ukuthi ngenze iziqiniseko sokuthi abantu bakithi abasali nangengozi kulamathuba. Ngizoqinisekisa futhi ukuthi abesifazane bahamba phambili kulokhu.
Sekuvumelekile ukutshalwa kukhuliswe umthunzi wezinkukhu ukuze kwakhiwe imithi neminye imikhiqizo. Angikuveze ukuthi kusayicala ukutshala uhwebe ngensangu. Sizosebenzisa lelithuba njengoba nokutshalwa komoba izinga lakho selehlile.
Kodwa manje sesivula amathuba aleligolide elisha ukutshalwa kwensangu ngokusemthethweni nangendlela elawulekayo. Siphinde sinikezele amalayisense namagunya okuthi itshalwe endaweni engamagushede ukuze ithole lowamsoco odingwa yilaba abenza imikhiqizo ethile. Sifuna izindawo zamakhosi zisetshenziswe ukutshala lomkhiqizo.
Nkosi yesizwe sikhule abesifazane benganikwa ngiso umhlaba nje lo wokwakha. Kepha siyazi ukuthi amakhosi amanje afuna ukubona intuthuko yasemadolobheni ifinyelela ezindaweni zethu ezabelweni. Kungakho sithi abesifazane abanikwe amathuba kuyo yonke imikhakha ngoba bondla isizwe ngokuningi.
Sengiphetha nje Mphathi wohlelo mangikusho ukuthi singuHulumeni onakelelayo sizimisele ukuvula amaningi amathuba emisebenzi ngokuthi sixhase osomabhizinisi abancane. Kuthiwa ukuwa kwenye indlu ukuvuka kwenye. Njengoba izinkampani ezinkulu zidiliza kunika osomabhizinisi abancane ithuba lokufufusa. Siyazi ukuthi nalaba abadilizwayo abaningi babo baphethe amakhono ayisimanga. Uma behlangana bengavula ezabo izinkampani.
Abaningi babo babeka isitini, bakhanda ugesi, baxhuma amapayiphi, babala izimali kanjalo kanjalo. Amakhono lawa esiwadingayo futhi sizoqinisekisa ukuthi uhulumeni uqala ngabo labantu uma efuna ukwenzelwa umsebenzi.
Nginifisela konke okuhle. Sithi nje MALIBONGWE IGAMA LABESIFAZANE.
WATHINTA ABAFAZI WATHINTA IMBOKODO!